Home Wararka General ka tirsan CXDS oo Muqdisho lagu dilay
General ka tirsan CXDS oo Muqdisho lagu dilay
War hadda nasoo gaaray ayaa sheegay in xaafadda Warshada caanaha ee Degmada Hodan ee magaalada Muqddisho lagu dilay Jeneraal ka tirsan Ciidamada Militariga Soomaaliya.
Jeneraalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabaa Yuusuf Cali Qasaay Yuusuf Cagey, waxaana warar is khilaafsan ay ka soo baxayaan qaabk dilka uu u dhacay.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda ayaa sheegay qofka dilka gaystay inuu yahay Sarkaal ka tirsan Ciidanka oo Jeneraalka ay wada murmeen sidaasina lagu qabtay, balse weli lama xaqiijin karo.
Goobta dilka uu ka dhacay oo ah guriga Jeneraalka ayaa hadda waxaa gaaray Ciidamada dowladda gaar ahaan Booliska oo halkaasi baaritaan ka wada.
Jeneraal Cagey ayaa muddo wuxuu ka soo shaqeey Gobolka Shabellaha hoose